कस्तो अचम्म ? महिलासँग यौ’न सम्बन्ध राख्नु परेमा २४ घण्टा अघि प्रहरीलाई जानकारी दिनुपर्ने - Kohalpur Trends
कस्तो अचम्म ? महिलासँग यौ’न सम्बन्ध राख्नु परेमा २४ घण्टा अघि प्रहरीलाई जानकारी दिनुपर्ने
काठमाण्डौ । संसारको कुनैपनि देशमा श्रीमान र श्रीमतीलाई एकअर्कासंग यौ’न सम्पर्क राख्ने अधिकार कानूनी रुपमा नै दिईएको छ । तर बेलायतको एक अदालतले एउटा युवालाई शारीरक सम्बन्धको विषयमा भने सुन्दा अचम्म लाग्ने निर्णय सुनाएको छ । ती युवकलाई कुनै महिलासँग यौन सम्बन्ध स्थापित गर्नु २४ घण्टा अघि प्रहरी र महिला दुबैलाई यसबारे जानकारी दिनुपर्ने आदेश दिइएको छ ।
साथै युवकलाई कुनै पनि महिलासँग अनावश्यक कुराकानीमा पनि रोक लगाइएको छ । ३९ वर्षका पुरुष डीन डायरमाथि यौ’न ह’म’लाका विभिन्न विषयमा मुद्दा चलिरहेको छ । एक महिलाले ती पुरुषमाथि पार्टीका बेला गलत तरिकाले छोएको र यसको विरोध गर्दा ब’लात्का’रको ध’म्की पनि दिएको आ’रो’प लगाएकी छिन् । यद्यपि, उनीमाथि लागेका कुनै पनि आ’रो’प पुष्टि भइसकेको छैन ।
डेलीमेलको रिपोर्ट अनुसार अदालतले युवकविरुद्धको आ’रो’प सुनेपछि उनलाई सेक्सु’अ’ल रिस्ट्रेन्ट अर्डर थमाइदिएको छ । युवकमाथि १४ वर्षकी एक किशोरीसँग यौन सम्बन्ध स्थापित गर्ने कोसिसलगायतका सात आ’रो’प लागेका छन् । बेलायतमा सेक्सु’अ’ल रिस्ट्रेन्ट अर्डर एउटा यस्तो आदेश हो जुन त्यस्ता व्यक्तिलाई दिइन्छ जसको दो’ष प्रमाणित भएको छैन र जसबाट समाजलाई खतरा छ ।
निर्माण क्षेत्रमा काम गर्ने यी पुरुषलाई दैनिक कामकाजमा कुरा नगरी नहुने महिलासँग मात्रै कुरा गर्न अनुमति दिइएको छ । जस्तै महिला बस कन्डक्टर, महिला प्रहरी । यसका साथै उनले कुनै महिलासँग यौन सम्बन्ध स्थापित गर्न चाहेको खण्डमा २४ घण्टा अघि प्रहरीलाई यसबारे जानकारी दिनुपर्नेछ ।
Previous Previous post: कस्तो अचम्म ? महिलासँग यौन सम्बन्ध राख्नु परेमा २४ घण्टा अघि प्रहरीलाई जानकारी दिनुपर्ने
Next Next post: तोलामा ९ सयले घट्यो सुनको भाउ